समाचार - यस वर्ष गुआंगजाउ डिजाइन हप्ता र स्टोन फेयरमा, हामीले एउटा सामग्री उठायौं जुन धेरै ट्र्याक्शन प्राप्त गर्दैछ। धेरै उद्योगहरू पापयुक्त ढु stone्गाको बारेमा उत्साहित भइरहेका छन्।
सिन्टर स्टोन भनेको के हो? यो एक मानव निर्मित अति कॉम्प्याक्ट सतह स्थायित्वका लागि ईन्जिनियर गरिएको हो। यो अब केहि बर्ष को लागी गरीएको छ, तसर्थ यदि तपाईं संग यो पहिले नै बनाएको छैन भने, तपाईं चाँडै हुन सक्छ। जे भए पनि, तपाइँ कसरी पात्रो ढु stone्गालाई ठीक तरीकाले काट्ने भनेर जान्न चाहानुहुन्छ। तपाईंको शिल्पकारको सीपहरू र सही उपकरणहरूको साथ तपाईं यस उत्कृष्ट सामग्रीबाट अधिकतम प्राप्त गर्नुहुनेछ।
के यो एक महान सामग्री sintered पत्थर बनाउँछ यसको स्थायित्व र बहुमुखी प्रतिभा हो। Sintered ढु stone्गा आवासीय र व्यावसायिक उपयोग, इनडोर र आउटडोर समेत फर्नीचरको लागि प्रयोग गरिन्छ। र यो धेरै लामो भयो कि रंग र बनावट विकल्पहरू राम्रोसँग विकसित भएका छन्। दुकानें विश्वव्यापी sintered ढु furn्गा फर्निचर बिक्री, र sintered ढु stone्गा काउन्टरटप्स, भुइँहरू, भित्ताहरू, र बाह्य वास्तुकला cladding स्थापना गर्दै छन्।
पापपूर्ण ढु St्गाका चुनौतिहरू
पापयुक्त ढु stone्गाको अनुपम गुणहरूले यसलाई काट्नको लागि सबैलाई बिर्सन नसक्ने स्ल्याबहरू बनाउन सक्दछ।
उदाहरणको लागि, केहि स्ल्याबहरूमा सतहमा छापिएको ढाँचा हुन्छ। यीमा कुनै चिप्स वा अपूर्णताहरूले किनारा ल्यामिनेशन पछि देखावटलाई बिगार्न सक्छ। नियोलिथ जस्ता अन्य पातलो ढु stone्गाका सामग्रीहरूका लागि जुन स्ल्याबको माध्यमबाट चालु डिजाइनहरू छन्, तपाईं अझै पनी सिधा कटौतीहरू चाहानुहुन्छ तपाईंको तैयार उत्पादनलाई उत्तम रूपमा देखाउनको लागि।
यदि तपाईंले काटहरू सहि पाउनुभयो भने, तपाईंको समाप्त कामको गुणवत्ता शीर्ष-स्तर हुनेछ। तपाईंसँग काम गर्न सक्ने sintered सामग्रीमा सबै काम हुनेछ। यसलाई गलत बनाउनुहोस् र तपाईं सम्भवतः भविष्यका कार्यहरूमा सामग्रीलाई वेवास्ता गर्न जे पनि लिनुहुन्छ।
यहाँसम्म कि यदि तपाईंसँग एउटा ब्रिज कटि machine मेसिन वा पानी चक्कु मेशिन काट्ने उपकरण छ, तर काट्ने गति धेरै ढिलो, कम दक्षता, सामग्री खपतलाई काट्ने छ, त्यसैले प्रशोधन लागत धेरै उच्च छ।
कसरी पात्रो ढुone्गा काट्ने अधिक छिटो र कम लागतमा
यस सामग्रीमा सफलता सरल छ: सीधा र आकार काट्छ.
सुपर सफा सीधा र आकार कटौतीउच्च-अन्त नतीजाहरूको लागि आवश्यक हो जुन तपाईं रेफरलहरू पाउनुहुन्छ। ती सटीक कटौतीहरू प्राप्त गर्न तपाईंलाई सही उपकरणको आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईंसँग पहिले नै एक स्वचालित sintered ढु stone्गा काट्ने मेसिन छ भने, तपाईं सेट हुनुहुन्छ। यदि तपाईं एक मा लगानी विचार छैन भने। स्वचालित sintered ढु stone्गा काट्ने मेशिनको उच्च सटीक र कठोरता मेल खाँदैन। काट्ने गति प्रति मिनेट १ meters० मिटरसम्म छ, हामीले सिन्डर्ड स्टोन सामग्रीहरूमा हाम्रो मेशिनको विस्तृत परीक्षण गरेका छौं। हामी विश्वस्त छौं कि तपाईले उस्तै उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन हाम्रो ग्राहकहरूले चीनभरि पाइरहेका छन्।